IRA Kudzivirirwa kubva kumatare edzimhosva, Vanokweretesa uye Kurambana neHurumende
IRA Kudzivirirwa Kwematare neHurumende
Zvakakosha kuronga nezvekurega kwako basa, uye kugadzira Individual Retirement Account (IRA) inogona kuva imwe yenzira dzakanakisisa dzekuita kudaro. Ichi chishandiso chekuronga chemari chinobatsira zvese kune vanhu uye varidzi vemabhizinesi madiki. Iyo inogona zvakare kuve yakakosha chikamu cheyakazara asset dziviriro chirongwa.
Chii chinoitika kana mhosva ikauya nenzira yako pasi patambo zvakadaro? Ndiyo yako IRA yakachengetedzwa kubva kune vane chikwereti? Nepo paine kumwe kuchengetedzwa kwemubatanidzwa, kwakawanda kwekudzivirirwa kweIRA kunosiyana nenyika. Muchikamu chino, tichaongorora mabhenefiti eIRA, tione kuchengetedzwa kunowanikwa nehurumende, uye nekukurukura zvaunogona kusarudza kana watarisana nedare kana imwe nyaya yepamutemo.
Kushandisa IRA yeRoirement
Kana usati wagadzira IRA, unogona kunge uchirasikirwa nehumwe mari hombe yemudyandigere. Investopedia inotsanangura IRA senge chishandiso chekudyara nemitero bhenefiti iyo vanhu vanoshandisa kugovera mari yekuchengetedza pamudyandigere. Mari dzinochengetwa muIRA dzinogona kusanganisira huwandu hwezvigadzirwa zvemari zvinosanganisira masheya, zvisungo, mari yekutengesa-inotsinhana (ETFs), pamwe nemari yemubatanidzwa. Masangano anotenderwa emari anotangisa maIRA, akadai semabhangi, makambani anotengesa mari, mibatanidzwa yemakambani inishuwarenzi, uye masangano ekuchengetedza uye echikwereti.
Mipiro kuIRA inouya kubva pamari inowanikwa. Mari kubva muzvikwereti, Social Security mabhenefiti, uye rutsigiro rwevana havaverenge semari inowanikwa. Nekuda kwekuti mari iyi inofanirwa kuitirwa pamudyandigere, pane gumi muzana yekubvisa chirango chekubvisa kwakaitwa pamberi pemakore makumi mashanu nemapfumbamwe, paine zvimwe zvinobvumidzwa. Kubhadhara mutero wemari kunogona zvakare kuve chirango chekubvisa pakutanga.
Investopedia inoenderera ichiongorora mhando dzakasiyana dzeIRA. Mumwe nemumwe wevateresi vanowanzosarudza pakati petsika neRoth IRA sarudzo. Mipiro kune yechinyakare IRA mutero unobviswa. Roth IRA mipiro haisi mutero unobvisirwa, asi mipiro inokodzera haina mutero. Panguva yemudyandigere, kubvisa kubva kune yechinyakare IRA inounza mutero pamitero yavo yemitero, nepo Roth IRA ichibvisa isingatore mutero.
Vanozvishandira vanhu kana varidzi vemabhizinesi madiki vanowanzo gadza SEP kana SIMPLE IRAs. Iyo yakareruka mushandi wepenjeni (SEP) IRA inotevera iwo iwo iwo mirawo wekubvisa seyakajairwa IRA. Chirongwa chekuchengetedza chekukwikwidza chevashandi (SIMPLE) IRA inoteedzerawo mitemo yetsika dzeIRA, asi zvakare inobvumidza vashandi kupa mipiro.
Sezvaunoziva, mhosva inogona kuuya nenzira yako chero nguva. Nekudaro, zvakakosha kutora matanho ekudzivirira mukana uyu pakutanga. Kune zvirongwa zvekurega basa, mutemo wezvematongerwo enyika unopa dziviriro kuburikidza neMushandi Wekutora Mutero Yemari Yekuchengetedzeka Mutemo wa1974 (ERISA). Retirement Tarisa inotsanangura kuti kudzivirirwa uku kunofukidza akawanda marongero evashandirwi, senge akarondedzerwa marongero ebatsiro uye 401 (k) s. Iyi dziviriro yemubatanidzwa haipo, zvisinei, apo wekare-murume kana murume ari kuyedza kuwana mugove weaya mafeni mukuenderera kwekurambana. Kana yako account yekurega basa isingakwanise ERISA, haina chengetedzo iyoyo.
IRAs hadziwira pasi peEERISA, asi ivo vane imwe dziviriro pasi pemutemo wekubhuroka kwemubatanidzwa. Iyo rollover IRA yechero ipi mari ine kumwe kudzivirirwa, pamwe neinopa IRA. Kusvika pamamirioni 1 emadhora eIRA anodzivirirwa, pamwe nekugadziriswa kwemitengo.
Kunze kwekubhuroka, IRA kuchengetedzwa kwemari nenyika inosiyana kune zvimwe zvinhu zvakaita sematare. Nyika dzinoverengeka dzinopa chengetedzo yakakwana kubva kune vane chikwereti kune avo vanogara maIRA, vachiwana kuchengetedzwa kumwechete kwezvirongwa zvakachengetedzwa zveEURISA. Dzimwe nyika dzinopa kunyangwe kudzivirirwa kushoma pane iyo ERISA inopa. Muchikamu chinotevera, tichaongorora kuti dziviriro yenyika dzakaita sei.
Nyika neHurumende IRA Kudzivirirwa Kuenzanisa
Pazasi pane yakareruka nyika nekuenzaniswa kwenyika kweIRAs sekuregererwa chivakwa kubva kune vane chikwereti, sezvakaburitswa na Muteresi Advisor. Matunhu mazhinji anogona kunge aine mamwe akasarudzika emitemo, ayo anosiyana nenyika.
mamiriro IRA Inoregererwa Roth IRA Inoregererwa
Alabama Ehe Ehe
Alaska Ehe Ehe
Arizona Ehe Ehe
Arkansas Ehe Ehe
California * Chikamu Aihwa
Colorado Ehe Ehe
Delaware Ehe Ehe
Florida Ehe Ehe
Idaho Ehe Ehe
Indiana Ehe Ehe
Iowa Ehe Ehe
Kansas Ehe Ehe
Kentucky ** Ehe Ehe
Louisiana Ehe Ehe
Maine Chikamu Aihwa
Michigan ** Ehe Ehe
Minnesota Ehe Ehe
Missouri Ehe Ehe
Montana Ehe Aihwa
Nebraska Chikamu Aihwa
Nevada Ehe Ehe
New Hampshire Ehe Ehe
New Mexico Ehe Ehe
New York Ehe Ehe
North Carolina Ehe Ehe
North Dakota Ehe Ehe
Ohio ** Ehe Ehe
Pennsylvania Ehe Ehe
Rhode Iceland Ehe Ehe
South Carolina Ehe Ehe
South Dakota Ehe Ehe
Tennessee ** Ehe Ehe
Texas Ehe Ehe
Utah Ehe Ehe
Vermont Ehe Ehe
Virginia Ehe Ehe
Washington Ehe Ehe
West Virginia Ehe Aihwa
Wisconsin Ehe Ehe
Wyoming Chikamu Chikamu
* MuCalifornia mukweretesi anogona kutora IRA yemunhu kana, mumaonero emutongi, mukweretesi ane dzimwe nzira dzekuzvitsigira panguva yekurega basa.
** Muna 2002, Dunhu Rechitanhatu rakatonga kuti ERISA yakavhara mutemo weMichigan unoregerera SEPs uye IRAs kubva kune munhu ane chikwereti. Sarudzo inoita senge inogumira kune SEPs uye SIMPLE IRAs. Uye zvakare, mutongo uyu unokanganisa Kentucky, Michigan, Ohio, uye Tennessee.
Wakaona nyika yako mune iripamusoro runyorwa uye waona kuti haina kuregererwa, kana chete chikamu kuregererwa? Izvi hazvireve kuti wabuda mune rombo rakanaka kana uchitova neIRA yako kumisikidzwa. Imwe yesarudzo dzako ndeye kufaira kubhuroka uye kutora mukana wekuchengetedzwa kweIRA mune ino maitiro.
Kana iwe wakambotarisana nekufaira kwekubhuroka, yako IRA inogona kukuchengetedza kubva pakurasikirwa nezvose zvaunazvo. Maererano ne IRA Mari Boka, iyo Bankruptcy Abuse Prevention uye Consumer Protection Act (BAPCPA) ya2005 yakapa chengetedzo kumari yechikwereti iyo yaichengetwa muIRA. Ichi chiito chinosunungura IRA mari kubva mukubhuroka nzvimbo, uye nekudaro inosunungura akawanda asina kuchengetedzeka bhizinesi uye vatengi zvikwereti. Inodzivirira iyo mari inoitirwa kuramwa basa.
Ose echinyakare neRoth IRAs ari pasi pemubhadharo wakakwana weUS $ 1 miriyoni kune ese maIRA. Inflation inokanganisa huwandu uhu, uye huwandu hungawedzerawo kana mutongi anoona nezvenyaya akaona kuti pane chikonzero chekuita izvozvo. Rollover IRA kubva SEP kana SIMPLE IRA inongogamuchira iyo $ 1 miriyoni yekudzivirira futi.
Semubatsiri weIRA, ungangotadza kunakidzwa necredit chengetedzo semunhu akagadzira nekubhadhara iyo IRA. Kana iye anowana weIRA mafaira ekubhuroka, kudzivirirwa kubva kune ane chikwereti zvirevo hakuchapiwi, Forbes anotsanangura. Izvi ndizvo zvakakonzerwa nemutongo wakaitwa neUnited States Dare Repamusorosoro. Chikonzero chiri shure kweichi ndechekuti, kana muridzi achinge afa uye asiri waakaroorana naye akawana account, mari idzodzo hadzichaitirwi pamudyandigere. Sezvo BAPCPA ichingo chengetedza mari yekurega basa, iyo IRA ikozvino inodonha kunze kwekudzivirirwa kwayo. Wawakaroorana anogamuchira IRA, zvisinei, anogona kuendesa izvo zvinhu muaccount yake uye kuramba achiwana dziviriro. Iye asiri-murume kana mukadzi haakwanise kuunganidza nhaka yeIRA nhumbi yavo.
Vasiri-murume wake vanobatsirwa havasi zvachose kunze kwemhanza, zvakadaro. Sezvo nguva zhinji anodikanwa anowana weIRA mwana, sarudzo hombe ndeyekunyora iye anowana seyekuvimba panzvimbo. Iyo yakasimbiswa trust yemwana kana mumwe asiri-mukadzi anowana anogona kuisa IRA midziyo mukutenda ikoko uye kuchengetedza izvo zvinhu kubva kune vane chikwereti. Iye mubatsiri acharamba achikwanisa kubatsirwa kubva kunhaka iyoyo, nekuti maitiro aya anoita sekunge kuvimba kwaive iye chaiye mubatsiri. Chero chero mari yatogovaniswa kubva kutrust, zvisinei, haichachengetedzwa.
Kudzivirira Zvese zvako Zvepfuma
Kuvhura nekuchengetedza IRA pakubata kwako basa kunofanirwa kungova chikamu chimwe chete chehurongwa hwako hwakazara hwekuchengetedza nhumbi. Kana iwe ukatarisana nedare kana kumwe kubatwa zviri pamutemo, iwe unoda kuzviitira iwe diki diki yemari tarisiro inogoneka. Sezvo Gungwa reMutemo inotsanangura, nzira yakakosha yekuita izvi kuronga kumberi. Kana mhosva yapera kana kushanda, matare mumatunhu mazhinji akapa mitemo inovatendera kuti ishandise chero shanduko pakati pemaakaundi.. Matare edzimhosva kazhinji anoona izvozvo kufambisa zvinhu panguva yematare kunzvenga basa rako rezvemari, asi kuronga kumberi kunogona kuchengetedza zviwanikwa zvako.
Zvimwe kunze kwekupa kune ako maakaundi mareti, kuumba trust ndiyo yakanaka yekudzivirira chiyero. Matirastii anobata zvinhu kuitira kuti vabatsirwe. Matirastii anotarisira matrust, uye ivo vanodzora mari uye kugoverwa kwevanowana. Kune mhando dzakasiyana dzematirasti, asi dziviriro yakanakisa inouya kubva kumatrust asingachinjiki, asingagone kumiswa kana kushandurwa mushure mekugadzirwa.
Imwe nzira ye kuchengetedza midziyo kubva kumatare edzimhosva iri kugadzira kambani kana yakatemerwa chikwereti kambani (LLC). Aya masangano anochengetedza vanhu vane zvese kana chikamu chebhizinesi, zvinoenderana nenyika. LLCs nemakambani vanoparadzanisa bhizinesi nemari yemunhu. Saka nekudaro, ivo vanogona kudzivirira ako wega zvinhu kubva mukutorwa kana mhosva iri ine chekuita nebhizinesi. Uye zvakare, dzimwe nzira dzekuchengetedzwa kwemidziyo dzinosanganisira kuve neyakakodzera inishuwarenzi kufukidza uye kutora mukana wemitemo yekuchengetedza zvivakwa.
Kuchengetedza IRA Yako Kubva Kurambana
Saka, unodzivirira sei IRA yako kubva pakurambana? Sezvakataurwa pamusoro, iyo yeRA chikwereti chengetedzo mitemo haina chengetedza yako IRA kubva pakurambana. Saka, iwe unoitei?
Heano maitiro. Isu takamisa iyo yega-inotungamirwa IRA. YeIra-inotungamirwa IRA inogona kuisa mari muchivande yakachengetwa, zvinopesana nekutengesa pachena, makambani. Izvi zvinogamuchirwa zvakakwana pasi pekodhi ye IRS. Nekudaro, vazhinji vachengeti veIRA havazokuudza izvi nekuti ivo havawani makomisheni pazvinhu zvakadaro.
Nekudaro, kutanga isu takamisa yega-inotungamirwa IRA. Iwe unoendesa yako IRA kune unozvitungamira-wega weIRA muchengeti. Ipapo isu tinogadza yakatemerwa dhizaini kambani (LLC) uye iwe unovhura account yekubhangi. Iwe unobvunza muchengeti wako weIRA kuti aise waya yako IRA mari kune iyo LLC.
Tevere, isu tinogadzira yekumahombekombe asset dziviriro kuvimba. Iyo yekumahombekombe trust ine chikamu chekurega basa uye isiri-yekurega mari chikamu. Inonyanya kushanda ndeye Cook Islands kuvimba kana Nevis kuvimba. Mukati mechikamu chekurega basa chetrust tinoisa offshore LLC. Iwe unovhura account yebhangi yeiyo LLC kumahombekombe. Iwe unobva waisa waya mari kubva kuUS-based LLC kuenda kune offshore LLC. (Anochengeta haachaisa waya mari kumahombekombe, ndosaka iwe uchida ma LLC maviri.)
Kana zvichidikanwa, yedu yekumhiri kwemutemo femu inogona kupinda mukati semaneja kana iyo LLC. Matare emunharaunda haana masimba pamusoro pekambani yemutemo yekumahombekombe. Saka, madare eU.S. Iyi inzira yechokwadi yemoto yatakashandisa pazviitiko zvakawanda zvakanyatso dzivirira IRA kubva pakurambana.
Tanga Kurudyi Rutsoka
Kunyangwe iwe uchitova neIRA munzvimbo kana uri kutsvaga kumisikidza imwe, ita shuwa kuti iwe une yakanakisa kufukidzwa nekutaura kune ane ruzivo wezvemari chipangamazano. Kuchengetedza zvinhu kubva pakutongwa inogona kuve yakaoma kuita inosiyana nenyika, saka fonera kana kutumira meseji kune vamwe vedu nyanzvi uchishandisa chikamu chekubata chepeji ino. Tichaenda pamusoro pesarudzo dzako newe uye nekupa rairo padanho rinotevera muchirongwa chako chekudzivirira zvinhu. Paunenge iwe wasarudza marongero emari akakunakira iwe, isu tichaisa maakaundi ako kuti uve nechokwadi chekuti iwe une yakanakisa kufukidza inogoneka. Mushure mezvose, kutora kwako pamudyandigere kunofanirwa kuve kunonakidza - uye iwe unoda kuti mari yawakawana irambe iripo!